Maalinta: Oktoobar 21, 2018
Kulamada Dhexdhexaadinta ee IZBAN Ma Dhammaadeen Go'aanka Dhabarka Dhagax
Shaqaalaha vehiclezmir ee gaadiidka tareenka ee magaalada İZBAN waxaa la siiyay lix safar oo qiimo leh. Ma jirin tanaasul; Wadahadalladii gorgortanka ee u dambeeyay ee Demiryol İş iyo İZBAN, sicirbararku wuxuu kordhay lix. [More ...]
Tareenka Si Loogu Sameeyo Kaalmo Loogu Sameeyo Ganacsiga Samsun
Qadka tareenka ee Samsun-Sivas, oo Atatürk ay ka saartay qodistii ugu horreysay ee 21 bishii Sebtember 1924, ayaa la furi doonaa dhammaadka sannadkan ka dib shaqooyinka cusboonaysiinta ee socda. Xawaaraha iyo awooda wadista tareenka ayaa kordhin doonta [More ...]
Waxay ka hadlayeen Mashruuca Tareenka ee Trabzon
Madaxweynaha Trabzon MMO Şaban Bülbül iyo xubno ka tirsan guddiga agaasinka AK Party Trabzon ku xigeenka Salih Cora ayaa booqday Ankara. Cora wuxuu yiri: B Mr. Bülbül wuxuu sameeyay maalgalino badan oo kusaabsan danaha magaaladeena iyo [More ...]